शरणार्थीको देश बन्दैछ नेपाल
भुटानी शरणार्थी अझै छन् झापामा । विदेशीले ८० हजारभ बढीलाई उतै लगिसके पनि हजारौं शरणार्थी बाँकी नै छन् । भुटानका राजा नेपालमा जन्मेकोले मेरो सम्झनामा छ नेपाल भन्छन् तर नेपालीभाषीलाई नेपालतिर लखेटेर आफ्ना नागरिकको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कहिले सोचेनन् ।
नेपालको कूटनीति पनि असफल भयो । शरणार्थी अझै बढ्दैछन् ।
१९५९ मा तिब्बतबाट दलाई लामा भारततिर भागेपछि सुरु भएको तिवेतियन शरणार्थी समस्या कहिले समाधान भएन । समाधान हुने कुरा पनि रहेन । तिबेतियनहरु त दलाई लामाका हतियारका रुपमा बिद्रोही पो बन्न थालेका छन् ।
र, नयाँ शरणार्थीका रुपमा म्यानमारबाट लखेटिएर बंगलादेश र भारतमा आएका रोहिंग्याहरु हजारौंको संख्यामा नेपालमा आएका छन् र जनसंख्या बृद्धि गरिरहेका छन् । यो नयाँ शरणार्थी समस्याले समाजलाई प्रभाव पार्न थालेको छ ।
आलम आतंक ः कहाँ छ सरकार ?
अदालतमा थुनछेकेको बहस चलिरहेको थियो, आलमका समर्थकले प्रहरी थानामै बम प्रहार गरेर प्रभावित पार्ने प्रयत्न गरे । शुक्रवार अन्तिम बहस के सकिएको थियो, न्यायाधीश दीपक ढकालले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिए र प्रहरी सुरक्षासहित राजधानी फर्किए । सरकारी वकिल फणीन्द्र कटवालले समेत न्यायाधीशसँगै सरुवा गर्न निवदेन दिएका छन् । यतिसम्मको आतंक ?
सुरुमा सांसद मोहम्मद आलमलाई बचाउन कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नै कांग्रेसविरुद्धको नेकपा षडयन्त्र भनेका थिए । पछि बोली सच्याए । आलमलाई बचाउन, निर्दोष साबित गर्नका लागि देशका एकसेएक वकिलहरु रौतहट पुगेर बहस गरे । जसमा प्रेमबहादुर खड्का, शम्भु थापाm शेरबहादुर केसी, रमणकुमार श्रेष्ठ, सुनील पोखरेल, योगेन्द्र अधिकारी, अनिरुद्द महतो, अनोजकुमार यादव, रामनाथ कुसवाहा, अफताब आलम, मो. सफी अहमद, किशोर राउत, रामबहादुर दास, सवुरीलाल ठाकुर, धीरेन्द्र तिवारी, जगदीश राय यादव, हरिशंकर प्रसाद, सोनेलाल पटेल, रामईश्वर प्रसाद, रामविनोद पटेल, नन्दकिशोर साह, राजाराम राय यादव, भाग्यनारायण झा, हेमचन्द्रलाल कर्ण, मोहम्मद मजरुल हक, शेख मैनुद्दिन, अनन्त अधिकारी, रामदरेश प्रसाद, रामविनोदकुमार गिरी, सञ्जीवकुमार मलिक, लालबहादुर यादव, विनयलाल कर्ण, जितेन्द्रकुमार सिंह रहेका थिए । तर बचाउन सकेनन् । आलम जेल चलान भएका छन् ।